‘११ बुँदे सम्झौता जस्तो स्पष्ट सम्झौता आजसम्म भएको छैन’ | Ratopati
‘११ बुँदे सम्झौता जस्तो स्पष्ट सम्झौता आजसम्म भएको छैन’
जनमत संग्रहको नाराजुलूस कार्यकर्ताहरु उत्साहित भएको अवस्थामा आएका धारणाहरु हुन्, त्यसलाई हामी मिलाउँदैछौं-बुझाउँदैछौं: स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका सचिव चन्दन सिंह
personएसके यादव exploreकाठमाडौं access_timeफागुन ३०, २०७५ chat_bubble_outline2
सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन बीच भएको सम्झौताका मुख्य सहजकर्ता थिए चन्दन सिंह । उनी सो गठबन्धनका केन्द्रीय सचिव पनि हुन् । गठबन्धनका सेकेण्डम्यानको रुपमा सक्रिय रहेका चन्दन सिंह विगतमा सद्भावना पार्टीमा रहेर काम गरेका राजनीतिज्ञ हुन् । मधेशको राजनीति र समस्यालाई नजिकबाट अध्ययन गरेका चन्दन सिंहले नै गठबन्धनलाई मूलधारमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन् । सरकार र सिके राउतबीच वार्ताको वतावरण बनाउनुदेखि लिएर अन्य सबै व्यवस्थामा सक्रिय रहेर राष्ट्रिय सहमति गरी ११ बुँदे सम्झौता गराउन सफल भए । प्रस्तुत छ, सहमतिपछि सम्झौताका बारेमा भएका टिकाटिप्पणी र अगामी रणनीतिका बारेमा स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका सचिव एवं वार्ताका सहजकर्ता चन्दन सिंहसँग रातोपाटीका लागि एसके यादवले गरेको कुराकानीः
सहमतिको मसी नसुक्दै ११ बुँदेप्रति विभिन्न टिकाटिप्पणी शुरु भयो नि किन?
–त्यहाँ जनमत संग्रह शब्द छैन, जनअभिमत शब्द प्रयोग गरिएको छ । जनअभिमत लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृयाबाट हुने कुरा हो, त्यसमा विवाद छदै छैन । म त्यसमा ही विवाद देखेको छैन । जनअभिमत आफै एउटा व्यापक कुरा हो । जनअभिमत भनेको अध्यावधिक चुनाव पनि हुन्छ र जनमत संग्रह पनि हुन्छ । ‘इक्सिट पोलिङ’ पनि हुन्छ, ‘सर्वे’ पनि हुन्छ । अर्थात् समयको माग अनुसार त्यसको काम हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ जनअभिमतका कुरा आएपछि संगठनका साथीहरुले जनमत संग्रहको कुरा आयो भनी कुरा गरेका छन् । किनभने हामीले शुरुदेखि जनमत संग्रहका कुरा जोडतोडले उठाएका थियौं ।
तर सहमतिप्रति कुनै प्रकारको आशंका नगर्न म सबैमा आग्रह गर्दछु । ११ बुँदे सम्झौताका एक नम्बरदेखि ११ सम्म हामीले अक्षरशः पालना गर्छौ र उता सरकारले पनि पालना गर्ने हामीलाई विश्वास लागेको छ ।
यो एउटा ऐतिहासिक सम्झौता हो । प्रचण्ड शान्ति सहमतिमा आउँदा सरकारले जुन सम्झौता गरेको थियो, त्यसपछि यो दोस्रो ऐतिहासिक सम्झौता हो । यसलाई हल्का रुपमा लिनु हुँदैन । यसको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन नै मधेशका लागि सम्पूर्ण देशको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
भन्नाले यो जनअभिमतलाई सरकारको तर्फबाट आफ्नै तरिकाले व्याख्या भइरहेको छ भने तपाईंहरुको तर्फबाट आफ्नै तरिकाले व्याख्या भइरहेका छन् कि के हो?
सहमति भएकै दिन तपाईहरुको संगठनबाट जनमत संग्रहमा सहमति भयो भनी नाराजुलूस भयो । त्यो चाहिँ के थियो?
कार्यकर्ताहरुको जोश र उत्साहले गर्दा त्यस्तो धारणाहरु बाहिर आएको हो । जुन विस्तारै मिलाउँदै गइरहेका छौं ।
विगतमा सिके राउतजीले अलग देशका लागि गर्नुभएको गतिविधि गलत थियो, त्यसलाई त्यागेर अब मुलधारको राजनीतिमा आएको भनी सम्झौतामा कहीँ पनि स्वीकार र उल्लेख गरिएको छैन भनेर पनि शंका गरिएको छ ?
–जसले यो कुरामाथि आशंका गरिरहेका छन्, उसलाई मैले त्यो ११ बुँदे सम्झौता बढ्न आग्रह गर्दछु । ११ बुँदे सम्झौतामा सबै कुरा उल्लेख छन् । ११ बुँदे सम्झौता जति स्पष्ट छ, त्यति स्पष्ट सम्झौता आजसम्म कहिले भएको थिएन । सरकारले कुनै दल वा संगठनसँग यति स्पष्टसँग सम्झौता गरिएको थिएन । केही व्यक्ति नबुझेर हल्ला गरिरहेका छन् । जसको कुनै तुक छैन । सम्झौताको बारेमा कुराहरु बाहिर आएपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रष्ट पार्नुभएको छ । हामीले पनि प्रष्ट पारेका छौं । अब यसमा कुनै दुविधा रहनु हुँदैन जस्तो लाग्छ ।
विगतमा जुन उद्देश्यले आन्दोलन गर्नुभयो त्यो गलत थियो भनी भन्नुभएको हो?
अहिले मूलधारमा आउँदा जनताको जनमत लिएर आउनु भएको हो कि तपाईंका नेतृत्वहरु गरेर आउनुभयो?
–जनताको मनोभावना बुझेर गठबन्धनले गरेको निर्णय अनुसार यो सब भएको हो । माओवादीले विगतमा लामो समय सशस्त्र आन्दोलन गर्यो । तर, सम्झौता गरेर मुलधारको राजनीतिमा आयो । पछि जनादेश लिन चुनावमा गयो । चुनावमा पनि राम्रै समर्थन पायो । जनताले अहिलेसम्म उनीहरुलाई साथ सहयोग दिइरहेको छ । त्यस्तै स्थिति हाम्रो पनि छ । हामी संगठनको निर्णयबाट यो कदम चालेका हौं । अब हामी पनि जनताको बीचमा जान्छौं । जनतासँग छलफल गर्छौं, जनताको मनोभावना, जनमत बुझेर संगठनको बैठक बसेर अगाडि बढ्छौं ।
हामीमाथि जनताले विश्वास गरेको छ । र, त्यही अनुसार हामी अगाडि बढ्छौं । संगठन बनाउने, मुद्दा र एजेण्डा आफ्नै तरिकाको छ, त्यसले हामीलाई विश्वास छ कि मधेशका जनतालाई हामीलाई साथ दिनेछ ।
उहाँहरुको भन्दा धेरै मुद्दा फरक र पृथक छन् । त्यो कुरा तपाईंलाई पनि थाहा छ, सारा दुनियाँलाई थाहा छ । त्यो कुरा विस्तारै हामी वाहिर ल्याउँछौं । आजै सबै कुरा नभनौं ।
March 14, 2019, 4:07 p.m. पबित्र मणि पौडेल
जवसम्म राउत जी को गठबन्धनले " बिगतका गतिबिधि त्यागेर हामी नेपालको राष्ट्रीय मूलधारमा आयौं जनअभिमत भनेको जनमत हैन" भनेर सार्बजनिक बक्तब्य मार्फत सबै लाई आश्वस्त पार्दैन तवसम्म ११ बूँदे सम्झौता शङ्काको घेरामा रहन्छ।छिटै केन्द्रीय कमिटिको बैठक बसेर निर्णय गरोस,हामी आसाबादी छौं।शुभकामना!
March 14, 2019, 2:26 p.m. Naren Karki
कुरा बुझेरै नबुझे जस्तो गर्नेहरु, राष्ट्र बिखन्ण्डन गर्न मल्जल गर्नेहरुले यो जवाफ हेर्नु । साझौता अछयरस पालना होस्, हिमाल+पहाड+तराइ कोही छैन यहाँ पराइ, मिलेर यो देश बनाउन सन्कल्प गरौ ।